Vivo waxay soo bandhigeysaa Sebtember 17 FunTouch OS 9.1 si rasmi ah | Androidsis
Vivo wuxuu soo bandhigi doonaa Funtouch OS 9.1 Sebtember 17
Eder Ferreno | | ROM, Noocyada Android
Vivo waxay nooga tagi doontaa dhowr taleefan oo waxtar leh toddobaadyadan, sida NEX 3 iyo NEX 3 5G markaa taleefannada kala duwan ayaa si dhakhso leh u koraya. In kasta oo aysan ahayn waxa keliya ee soo-saaraha Shiinuhu uu naga tagayo muddo yar ka dib. Sababtoo ah waxaa la xaqiijiyay inay soo bandhigi doonaan nooca cusub ee lakabkooda qaabeynta toddobaadkan.
Funtouch OS 9.1 wuxuu noqon doonaa nooca cusub ee lakabka qaabeynta telefoonada Vivo. Ma sugi doono waqti dheer si aan ula kulano iyada, maxaa yeelay waxay rasmi noqon doontaa berri, Sebtember 17. Marka waan arki karnaa wararka naga tagaya.
Layaab ma noqon doonto haddii cusub Vivo NEX iyo NEX 5G ayaa la imanaya Funtouch OS 9.1 si rasmi ah lakab u sameysnaan. Xaqiiqdii, sumadda ayaa tan ku muujisay fiidiyow la soo galiyay. In kasta oo ilaa iyo hadda aysan jirin wax xaqiijin ah oo arrintan la xiriira dhankiisa.
Noocaan cusub ee Funtouch OS wuxuu noqon doonaa cusbooneysiin yar, maxaa yeelay hubaal ma noqon doonto nooca ku saleysan Android 10. Laakiin waxay soo bandhigi doontaa xoogaa horumar ah oo laxiriira Funtouch OS 9. Laakiin maxay noqon doontaa hagaajinta la bilaabi doono lama oga.
Nasiib wanaag, berrito waxaan ka takhalusi doonaa shakiga maxaa yeelay Vivo waxay horey u shaacisay inay rasmi noqon doonto. In kastoo hubaal taleefannadu ha helaan dareenka iyo maaha lakabkeeda cusub ee qaabeynta, gaar ahaan haddii ay tahay cusbooneysiin yar sida la filayo inay ku dhacdo kiiskan.
Nasiib darrose, sidii caadada u ahayd kiiska Vivo, moodooyinkan waxay u badan tahay inaan laga sii deyn doonin Yurub. Maaddaama shirkaddu aysan joogitaan ku lahayn dalkeenna, inay suuqyo ka ahaato Aasiya sida Shiinaha ama Hindiya kuwa ugu muhiimsan soo-saaraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » ROM » Vivo wuxuu soo bandhigi doonaa Funtouch OS 9.1 Sebtember 17
Xadka Realme 5 waa kan ugu iibsiga badan Hindiya
Samsung ayaa bilaabi doonta taleefan gacmeed heer sare ah